Momba an'i Google, ny ampihimamba azy, ny vokatra sy ny zavatra hafa | Avy amin'ny Linux
Momba an'i Google, ny Monopoliany, ny vokatra sy ny raharaha hafa
Te hizara aminao ny hevitro manokana aho, izay mety tsy mety na tsia, saingy io no eritreritro. Impiry isika no tsy nandre izany Google mikasa ny hamorona (raha mbola tsy manana ianao) un ampihimamba amin'ny tranonkala? Ahoana raha izy ampihimamba de Google ity, ahoana raha izy ampihimamba de Google ny hafa.
Hitako fa maro ny olona manahy an'izany Google raiso ny fibaikoana ny ankamaroan'ny Internet, fa andao ampitahaintsika amin'ny orinasa hafa izy ireo Monopolista como el Apple o Microsoft. Ohatrinona no andoavanao anay Google Ampiasaina Gmail, Google Docs, Gtalk, Google Reader, Google Earth… Sns? Takianay ve ny hampiasa ny vokatrao? Inona ny tena vidiny tokony aloantsika? Ny zavatra mampalahelo indrindra amin'ny maro dia ny ankamaroan'ny vokatra tena tsara.
Con Google Chrome, tanjona ny hahatratra ny fitarihana eo amin'ny tsenan'ny navigateur, toy ny nahatratrarany tamin'io fotoana io Internet Explorer Inona no tsy mety amin'izany?
Google Chrome Izy io dia mpizaha tranonkala izay nahavita nanjary be mpitia noho ny fahamendrehany, ary azavaiko, ho ahy tsy lavorary izany, malahelo zavatra maro aho Firefox. Saingy tsy azo lavina fa tonga hatrany amin'ny zoro izany Firefox tsy afaka niditra. Haingam-pandeha, fahombiazana, fahatsorana, dia adjectives izay mampiavaka an'ity browser ity, natao tsy hidirana amin'ny toerana lavitra indrindra amin'ny tambajotra amin'ny fotoana fohy indrindra.
Inona no ho dingana manaraka? Ny ho avy (na dia tsy tiako aza ilay hevitra) dia ny fananana ny zavatra rehetra ao anatiny The Cloud. Angamba Google rahampitso dia manana ny Ampihimamba sy fanaraha-maso amin'ny Internet, fa ilaina kosa ny mijery hoe hatraiza ny fiatraikany eo amintsika mpampiasa. NY Privacy tandindomin-doza foana ianao, mifandraisa amin'ny Internet fotsiny. Google, Facebook, MicrosoftIzy rehetra dia mahavita manao ny mpampiasa handefa data izay angonin'izy ireo avy eo.
Saingy tsy very ny zava-drehetra, na izany aza Chrome alefaso ohatra ny data Google tsy fantatsika fa misy izany chrome o Vy vy fa tsy manao izany izy ireo. Mety hampidi-doza foana ny fananantsika ny mailaka, antontan-taratasy ary ny hafa The Cloud (Gmail ohatra), fantantsika izany kanefa mbola manohy manao izany isika.
Izany no antony tsy mampifantoka ahy ity olana ity amin'izao fotoana izao, fa tsy amin'ny Google farafaharatsiny. Misy zavatra marefo kokoa toa LASOPY maharikoriko fa izay an'ny Avaratra dia maniry ny handray an'izao tontolo izao. raha Google omeo vokatra tsara aho, fa tsy mangataka amiko (toa) tsy misy valiny na fanerena ahy hampiasa azy ireo, tsara izany amiko. Misy afaka mieritreritra Internet ve raha tsy misy Masindahy Google?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Momba an'i Google, ny Monopoliany, ny vokatra sy ny raharaha hafa
Amin'ny heviny hentitra ny atao hoe ampihimamba http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio, tsy izany i google.
Azo takarina ny "tahotra" an'ny olona, ​​nahatonga antsika tsy hatoky orinasa goavambe i Microsoft ary mahita ny "loza" izay ananantsika ankehitriny amin'ny endrika azo idirana, dia tonga imposition tampoka, sahala amin'ny nataon'i Microsoft.
Miombon-kevitra aminao aho amin'ny fandinihanao anao, ny vokatra google dia tena tsara, tsy misy manery antsika hampiasa azy ireo, ary ny zavatra tsara indrindra, dia afaka izy ireo (mandraka ankehitriny), andao hankafizintsika izany ary atsaharo ny fanahiana momba izay mety ho izy.
jdgr00 dia hoy izy:
Izaho dia mampiasa vokatra Google be dia be, satria mora ny manana ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray, miaraka amin'ny zava-misy tsiambaratelo .... Tsy matahotra aho, voalohany indrindra satria tsy manana nafenina aho ary ny tena marina dia ny tsiambaratelo dia ny zavatra tsy dia lehibe indrindra eto an-tany.
Mahafinaritra ahy ny maheno ireo mpampiasa izay "miahy fatratra" ny momba ny fiainana manokana, ary ao amin'ny Facebook dia manao ny lokon'ny pataloa aza izy ireo, Facebook no mpamory angon-drakitra sy mpivarotra lehibe.
Valiny amin'ny jdgr00
ary satria vokatra avo lenta izy ireo mazava ho azy! (Tsy noteneniko io)
Ohatrinona no andidian'ny Google antsika hampiasa Gmail, Google Docs, Gtalk, Google Reader, Google Earth ... sns?
Tsy izany no fanontaniana fa ny fanontaniana dia hoe: Hanao ve izy ireo?
Takianay ve ny hampiasa ny vokatrao?
Ny andianteny majika ... ¬¬
Google Chrome dia mpitety tranonkala izay nahavita be laza noho ny fahamendrehany
Araka ny efa fantany koa raha mihaino reggaeton ianao na mijery pôrnôgrafia
Fa tsy ny rehetra no very
Mihomehy amin'ny tantara iray ihany
Fa farafaharatsiny mba tsy mihomehy ry zareo !! andao jerena raha mahita lahy antitra isika
Mandrosoa, anaka. Mila valiny kendrena bebe kokoa izahay.
Lucas Matias dia hoy izy:
Manontany tena aho fa mitovy amin'ny Courage ...
Mbola ho afaka ve izy ireo?
Ka mba hitan'i elav fa marina aho
Voalaza tsara, maninona no miady mafy amin'ny san google raha toa ka tsara izay omeny.
fiainana manokana aiza?
Avy amin'ireo mpamatsy Internet antsika dia voahitsakitsaka ny fiainantsika manokana, ka raha misy ny tsiambaratelo, lainga izany, tsy misy intsony izy io, avy am-bava ka hatrany amin'ny fanehoankevitra eto, dia tsy nisy intsony ny fiainana manokana.
izy ireo dia alternatives toa ny gana gana
Francesco dia hoy izy:
Ny olana dia tsy mahita pejy marobe ny gana gana gana, ohatra ny tranokala italiana maro izay tsidihiko, na izy ireo koa.
Mamaly amin'i francesco
Fitsinjarana natokana na tohanana ho an'ny Xfce
Fomba fampiasana / famoronana tenimiafina tena azo antoka